သူ့အကျင့်ကို ဖျက်ခဲ့တာ ကျွန်မပါပဲ … – Shinyoon
သူ့အကျင့်ကို ဖျက်ခဲ့တာ ကျွန်မပါပဲ …
January 12, 2021 by Shin Yoon
သူကျွန်မအပေါ် အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စကားတွေမသုံးချင်တော့ဘူး ကျွန်မသူ့ကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေအနောက်မှာ သူ့အကျင့်ကို ဖျက်ခဲ့တာ ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်နေခဲ့တာလေ အခုက သူက ချစ်တဲ့ကျွန်မမဟုတ်ပဲ ကျွန်မချစ်တာကိုပဲ ခံချင်နေတဲ့ သူဖြစ်နေခဲ့ပြီလေ ….
စချစ်တဲ့နေ့တွေတုန်းကတော့ … သူရောကျွန်မရော မျှမျှတတချစ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ပိုချစ်ခဲ့မိတဲ့ကျွန်မ အမှားတွေ စပြီးလုပ်မိတော့တာပဲ … ချစ်ရင် မာနတွေမထားရဘူးဆိုတဲ့ အဆိုတွေအရ သူဖုန်းဆက်မလာလဲ ကိုယ်ဆက်လိုက်မှာပေါ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ သူမဆက်ခင်ကိုယ်က ဦးအောင်ဆက်နေရင်းက သူ့ဘက်က စပြီးခေါ်လာမယ့်ဖုန်းတွေ ကျွန်မ မျှော်ခွင့်တွေမရှိတော့ဘူး အခုချိန်ထိ …
ချစ်သူနှစ်ယောက်မှာ နားလည်မှုတွေလိုအပ်တယ်တဲ့ ကျွန်မ နားလည်ပေးခဲ့တာပေါ့ အပြင်ရောက်နေတယ်လို့ ပြောတဲ့အခါ ဘယ်သူနဲ့လဲမမေးပဲ ပြန်ရောက်တဲ့အခါပြောပေးပါဆိုတဲ့ စကားလုံးပဲ သုံးခဲ့တယ် … သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မို့တဲ့ တစ်ခါတစ်ရံနေမှာပါဆိုပြီး ကိုယ်မတားဆီးဖြစ်ခဲ့ဘူး သူလဲကိုယ့်ကို နားလည်ပေးမယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလဲ ပါတာပေါ့
နောက်ပိုင်းကျတော့ ကိုယ်ကချည်းပဲ နားလည်ပေးခဲ့ရတာပါ နားလည်မပေးနိုင်တဲ့အခါကိုယ်ကပဲ မှားသလိုမျိုးတွေအထိဖြစ်သွားကလဲလွဲရင် ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်ဆက်ပြီး နားလည်ပေးနေမှသာ အဆင်ပြေတော့မယ့်အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့
အမှားတွေ ရှိလာတဲ့အခါ .. လူပဲလေ အမှားနဲ့မကင်းပါဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်လို့ မပြောသေးခင် ကိုယ်က ဦးအောင်ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့မိတာ ပြန်ပြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အထင်တွေနဲ့ပေါ့ … တကယ်တမ်းပြန်ရခဲ့တွေကျတော့ … ဘယ်လိုအမှားမျိုးမဆို တောင်းပန်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ အတွေးတွေ သူ့ခေါင်းထဲ ဝင်သွားတယ်လေ …
ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ မှားခဲ့တာ သိပ်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ကျွန်မပဲ သူ့အကျင့်တွေကို ဖျက်ခဲ့မိတယ်ထင်ပါတယ် အခုဆို ကိုယ်က ချစ်လားမမေးပဲ အမြဲတမ်းချစ်တယ်ပြောနေတတ်တော့ သူက ချစ်တယ်ပြန်ပြောဖို့တောင် ဝန်လေးနေတတ်ပြီလေ ..
အရင်လိုအခြေအနေတစ်ခုကို ပြန်ရမယ်ဆိုရင် သူဂရုစိုက်တာခံရတဲ့ ခပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေးအဖြစ်ပဲနေချင်တယ် ခုက ကိုယ်ဆွဲထားနေလို့သာ မြဲနေရတဲ့လက်တွေလိုပဲ နာကျင်စရာတွေပဲ ကိုယ့်အတွေးထဲ ပြည့်နေတယ် ဖြစ်နိုင်ရင် ကျွန်မ ချစ်နေတာကိုတော့ မြင်စေချင်တယ် …
သူ့အက်င့္ကို ဖ်က္ခဲ့တာ ကြ်န္မပါပဲ …
သူကြ်န္မအေပၚ အရင္လုိမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ စကားေတြမသံုးခ်င္ေတာ့ဘူး ကြ်န္မသူ့ကုိ သိပ္ခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြအေနာက္မွာ သူ့အက်င့္ကို ဖ်က္ခဲ့တာ ကြ်န္မ ကိုယ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ေနခဲ့တာေလ အခုက သူက ခ်စ္တဲ့ကြ်န္မမဟုတ္ပဲ ကြ်န္မခ်စ္တာကိုပဲ ခံခ်င္ေနတဲ့ သူျဖစ္ေနခဲ့ျပီေလ ….
စခ်စ္တဲ့ေန့ေတြတုန္းကေတာ့ … သူေရာကြ်န္မေရာ မွ်မွ်တတခ်စ္ခဲ့တယ္လုိ့ပဲ ထင္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ပိုခ်စ္ခဲ့မိတဲ့ကြ်န္မ အမွားေတြ စျပီးလုပ္မိေတာ့တာပဲ … ခ်စ္ရင္ မာနေတြမထားရဘူးဆိုတဲ့ အဆိုေတြအရ သူဖုန္္းဆက္မလာလဲ ကိုယ္ဆက္လုိက္မွာေပါ့ဆုိတဲ့အေတြးနဲ႕ သူမဆက္ခင္ကိုယ္က ဦးေအာင္ဆက္ေနရင္းက သူ့ဘက္က စျပီးေခၚလာမယ့္ဖုန္းေတြ ကြ်န္မ ေမွ်ာ္ခြင့္ေတြမရွိေတာ့ဘူး အခုခ်ိန္ထိ …
ခ်စ္သူနွစ္ေယာက္မွာ နားလည္မႈေတြလုိအပ္တယ္တဲ့ ကြ်န္မ နားလည္ေပးခဲ့တာေပါ့ အျပင္ေရာက္ေနတယ္လို့ ေျပာတဲ့အခါ ဘယ္သူနဲ႕လဲမေမးပဲ ျပန္္ေရာက္တဲ့အခါေျပာေပးပါဆိုတဲ့ စကားလံုးပဲ သံုးခဲ့တယ္ … သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕မို့တဲ့ တစ္ခါတစ္ရံေနမွာပါဆိုျပီး ကိုယ္မတားဆီးျဖစ္ခဲ့ဘူး သူလဲကိုယ့္ကို နားလည္ေပးမယ္လုိ့ ထင္ခဲ့တာလဲ ပါတာေပါ့
ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ကုိယ္ကခ်ည္းပဲ နားလည္ေပးခဲ့ရတာပါ နားလည္မေပးနိုင္တဲ့အခါကိုယ္ကပဲ မွားသလုိမ်ိဳးေတြအထိျဖစ္သြားကလဲလြဲရင္ ကုိယ့္အတြက္ ကိုယ္ဆက္ျပီး နားလည္ေပးေနမွသာ အဆင္ေျပေတာ့မယ့္အေျခအေနေတြ ျဖစ္လာတာေပါ့
အမွားေတြ ရွိလာတဲ့အခါ .. လူပဲေလ အမွားနဲ႕မကင္းပါဘူးဆိုတဲ့အေတြးနဲ႕ ေတာင္းပန္ပါတယ္လို့ မေျပာေသးခင္ ကိုယ္က ဦးေအာင္ခြင့္လႊတ္ေပးခဲ့မိတာ ျပန္ျပင္လာလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့အထင္ေတြနဲ႔ေပါ့ … တကယ္တမ္းျပန္ရခဲ့ေတြက်ေတာ့ … ဘယ္လုိအမွားမ်ိဳးမဆို ေတာင္းပန္စရာမလုိဘူးဆိုတဲ့ အေတြးေတြ သူ့ေခါင္းထဲ ၀င္သြားတယ္ေလ …
ကြ်န္မကိုယ္တိုင္ပဲ မွားခဲ့တာ သိပ္ခ်စ္ပါတယ္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ကြ်န္္မပဲ သူ့အက်င့္ေတြကို ဖ်က္ခဲ့မိတယ္ထင္ပါတယ္္ အခုဆို ကိုယ္က ခ်စ္လားမေမးပဲ အျမဲတမ္းခ်စ္တယ္ေျပာေနတတ္ေတာ့ သူက ခ်စ္တယ္ျပန္္ေျပာဖို့ေတာင္ ၀န္ေလးေနတတ္ျပီိေလ ..
အရင္လုိအေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္ရမယ္ဆိုရင္ သူဂရုစိုက္တာခံရတဲ့ ခပ္ဆုိးဆိုးေကာင္မေလးအျဖစ္ပဲေနခ်င္တယ္ ခုက ကုိယ္ဆြဲထားေနလို့သာ ျမဲေနရတဲ့လက္ေတြလုိပဲ နာက်င္စရာေတြပဲ ကုိယ့္အေတြးထဲ ျပည့္ေနတယ္ ျဖစ္နုိင္ရင္ ကြ်န္မ ခ်စ္ေနတာကိုေတာ့ ျမင္ေစခ်င္တယ္ …
အတိတ်ကို မျှော်ရင်းလွမ်း …
သူချစ်ချစ်မချစ်ချစ် ကိုယ်ချစ်နေရရုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ် …